Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Virus Problems » Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem]
1 Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem] on 1st March 2010, 6:24 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 14
တညျနရော : Hlaing
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-02-27
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 28
ကျတော့် Memory Stick လေး Virus ကိုက်နေလို့ ဘယ်လိုသက်ရမလဲ Anti Virus နဲ့သက်တာလဲမရဘူးဖြစ်နေတယ် Kasper Sky နဲ့ေ၇ာသက်လို့ရပါသလား ပြီးတော့ Kasper Sky ကိုေ၇ာ stick ထဲမှာထည့်ထားလို့ရပါသလား ?
Last edited by solakoko on 27th April 2010, 10:18 am; edited2times in total (Reason for editing : ADMINISTRATION BOARD မှ ပြောင်းထားပါသည်။)
2 Re: Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem] on 1st March 2010, 7:51 pm
Post title edit လုပ်ထားပါတယ်နော်
ဒါနဲ့ ဘာ Virs ကိုက်တာလဲ ဆိုတာသေချာပြောပေးပါခင်ဗျာ
ဒီပြဿနာနဲ့ကြုံဖူးတဲ့သူတွေ ရှိရင် ၀င်ရှင်းပြပေးလို့ ရမှာမို့ ပါ
3 Re: Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem] on 2nd March 2010, 8:49 am
တညျနရော : A PLACE ON THE EARTH
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-11-12
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 87
problem အပြည့်အစုံ ပြောပြမှ ရမှာပေ့ါ။
4 Re: Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem] on 2nd March 2010, 11:13 am
Sorry ပါဗျာ ဘာ Virus လဲဆိုတာတော့ကျတော်လဲသေချာမသိဘူး သေချာတာကတော့ Stick စတက်လိုက်တာနဲ့ သုံးနေတဲ့ ကွန်ပျူတာပါလေးသွားတယ် ပြီးတော့ Anti Virus ခံထားတော့ ဖိုင်တွေကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူး Virus ရှိကြောင်းပဲပြတယ် Repair လုပ်ရင် ဖိုင်တွေပျောက်ကုန်လို့......
5 Re: Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem] on 2nd March 2010, 11:33 am
antivirus က ဘာတင်ထားသလဲ။
update လုပ်ထားရင်သတ်လို့ ရမှာပါ။
6 Re: Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem] on 2nd March 2010, 11:56 am
ပြောလို့မတက်ဘူးဗျ ကျတော်က Internet ဆိုင်မှာသုံးတာဆိုတော့ Virus ကိုက်တဲ့ဖိုင်တွေကို Delet လုပ်လို့လဲမရဘူး Repair ပဲလုပ်လို့ရတယ် Repair လုပ်ရင်လဲ ဖိုင်တွေပျောက်ကုန်လို့..........
7 Re: Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem] on 2nd March 2010, 5:19 pm
avira နဲ့စစ်ကြည့်ပါလား သူလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်
8 Re: Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem] on 2nd March 2010, 5:35 pm
avira လေးရှိရင်တင်ပေးပါလား ကျေးဇူးပြုပြီး.......
9 Re: Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem] on 2nd March 2010, 5:47 pm
10 Re: Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem] on 3rd March 2010, 2:51 pm
window+r ကိုနှိပ်ပြီး cmd ကိုရိုက်ထည့်ပြီး enter ကိုနှိပ်ပါ ။ ပြီးရင် ကိုယ့် stick က ဘယ်အပိုင်းမှာ ရှိတာလည်း (f: , g: ) အဲ့လိုမျိုးရိုက်ထည့်ဗျာ ။
ပြီးရင် attrib နဲ့ ကြည့်ဗျာ ။ ပြီးရင် virus ဖိုင်ိကိုကြည့်ပြီး attrib -a -r -s -h ပြီးရင် file name ကိုရေးဗျာ ။ပြီးရင် enter နှိပ်လိုက် ။ ပြီးရင် del ရိုက်ပြီး virus နာမည်ကို ရိုက်ထည့်ဗျာ ။ တခြားဟာတွေကိုလည်း
အဲ့လိုမျိုးရှင်းဗျာ ရတယ် ။ ကျွန်တော်ကတော့ stick ကို virus ကိုက်ရင် အဲ့အတိုင်းရှင်းလိုက်တာဘဲ ။
11 Re: Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem] on 3rd March 2010, 5:07 pm
samurai wrote: window+r ကိုနှိပ်ပြီး cmd ကိုရိုက်ထည့်ပြီး enter ကိုနှိပ်ပါ ။ ပြီးရင် ကိုယ့် stick က ဘယ်အပိုင်းမှာ ရှိတာလည်း (f: , g: ) အဲ့လိုမျိုးရိုက်ထည့်ဗျာ ။
အဲ့ဒီ့နည်းက အချို့အချို့ သော Virus တွေပဲရတယ်ခင်ဗျ... နာမည်ကြီးသိနေရက်နဲ့ ဖျက်မရတာတွေအများကြီးပါ
12 Re: Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem] on 3rd March 2010, 8:53 pm
အင်းဟုတ်တယ်... အဲလိုဖျက်မရတာတွေကျတော့ ဘာနဲ့ထပ်ဖျက်လဲ... အလွယ်နည်းလေးတွေရှိသေးလား... alt.332 အဲလိုပြောပေးပုံထောက်ရင် သိနေပုံရတယ်... ပြောပြပေးလေကွာ.... အာဘွား... (မှတ်ထား ငါ့ကိုချည်းလုပ်လုပ်နေတာ)
13 Re: Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem] on 3rd March 2010, 8:58 pm
ပြောပါအုံး လူလေး alt သုံ့းသုံးနစ်ရေ အကိုလဲ သိချင်ပါတယ်
မပြောလိုကတော့ alt သုံးသုံးနှစ်ကနေ စုန်စုန်နစ် ဖြစ်သွားမယ်
ဟိ ဟိ စတာနော်
14 Re: Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem] on 4th March 2010, 8:41 am
Windows virus တွေက Linux Platform တွေမှာ အလုပ်မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Linus OS မှာ Delete လုပ်ကြည့်ပါလား။
15 Re: Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem] on 4th March 2010, 10:42 am
ဘုရားဘုရား အချွန်နဲ့မတဲ့သူက မတယ်...ဖဲ့တယ်သူက ဖဲ့တယ်... တားတား ဘာမှမတိပါဘူးခညာ...ဖျက်လို့မရတာပဲသိတာပါ ဘယ်လိုဖျက်တယ်ဆိုတာမသိရိုးအမှန်ပါ
Kasper တင်ပြီး စစ်လိုက်တာပါပဲ ကျန်တာမလုပ်တတ်ပါဘူး
16 Re: Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem] on 28th May 2011, 3:03 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 16
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2011-05-05
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : -1
virus က data administrator.exe လို့ ရေထားတယ်........
17 Re: Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem] on 28th May 2011, 10:47 pm
sana wrote: အစ်ကိုပြောသလို ကျတော်လုပ်ကြည့်တာမရဘူးဗျာ.......
ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်လဲဆိုတာ ပြောပြပါလား။ အလုပ်လုပ်ပုံသိရင်တော့ solution ရဖို့ နီးစပ်နိုင်ပါတယ်။
Virus မွေးမြူရေးစခန်းမှာ သိမ်းထားချင်လို့ တင်လို့ ရရင်တင်ပေးပါလား။
18 Re: Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem] on 2nd June 2011, 2:44 pm
အကို ရေ....ဗိုင်းရပ်စ်မွေးမြူရေးစခန်းကအကောင်လေးတွေကျွန်တော့်ကိုလွှဲပေးပါလား... ကျွန်တော်လဲလိုချင်လို့ပါဗျ......
19 Re: Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem] on 6th June 2011, 6:22 pm
အနော်လုပ်တဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုပြောကြည့်မယ်....အနော့်စက်မှာ.... salty ဆိုတဲ့သတ္တ ၀ါဝင်တုန်းကလေ....အဲ့အကောင်က..အနော့်စက်က *.exe မှန်သမျှသမတာခင်ဗျ...အနော်ဆုထားတဲ့ဆော့ဝဲရဲ့တစ်ဝက်လောက် ကုန်ပါကောလား...အဲ့ဒါလေ..ဒီတိုင်းဆို...အကုန်ကုန်တော့မှာပဲဆိုပီး.....အဲ့ဒီ *.exe ဖိုင်တွေအကုန်လုံး(virus ဖိုင်တွေအပါအ၀င်) အားလုံးကို...image ရိုက်ပလိုက်တယ်ခင်ည...အဲ့ဒီတော့မှ...windows အသစ်ပြန်တင် ပီးတော့..အဲ့ image ဖိုင်ကို..ပြန်ဖွင့်(Shift key ဖိလျှက်)...ပီးတော့ virus စစ်...virus ဖိုင်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေကို ပြန်သုံး...ပီးတော့အဲ့ image ဖိုင် ကိုဖျက်ပလိုက်တယ်..သွားကောအဲ့ဒီ virus ....ဆိုင်ပို့ရင်ပိုက်ပိုက်ကုန်မှာဆိုးလို့အဲ့နည်းနဲ့ရှင်းလိုက်တယ်ခင်ည....အဲ့ virus ကလေဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆို...window အသစ်ပြန်တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်..D: ထဲက exe တစ်ဖိုင်ဖိုင်ကနေ C: ကိုပြန်ကူးတယ်ခင်ည....လူကိုအသက်ထွက်မတတ်ပဲ...ပြန်ကူးလိုက်ပြန်တင်လိုက်နဲ့တိုင်ပတ်နေတာ...အစ်ကိုလည်း...stick ထဲကဟာတွေကို image ရိုက်..ပီးတော့ ဟာ့ဒစ်ထဲကိုကူးတင်လိုက်...ပီးရင် stick ကို format ချ...ပီးတော့ image ကို ပြန်ဖွင့်.. အန်ကယ် ဗိုင်းရပ်နဲ့ပြန်စစ်....ဗိုင်းရပ် မဟုတ်တာတွေပြန်သုံး...ကျန်တာဖျက်ပစ်လိုက်ပေါ့ဗျာ....
20 Re: Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem] on 20th October 2011, 9:03 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 9
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-12-29
ကျွန်တော့ အဖြစ်လေးတစ်ခု ၀င်ပြောပြမယ်နော် မှားတာရှိရင်ခွင့်လွတ်ဗျာ။
တနေ့က အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ ကျွန်တော့ memory stick ထိုးလိုက်တော့ Virus ၀င်သွားတယ်ဗျ။
၀င်သွားတဲ့ virus က Recycler ဗျ ဒါနဲ့ ချက်ချင်းလဲသိလိုက်လို့ သတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။
shift+DEl ပေါ့ဗျာ မရဘူးဗျ။ attrib ပြောင်းပီးဖျက်တယ် မရဘူးပဲဗျ ခဏပျောက်ပီးပြန်ပေါ်လာတယ်။Unlocker software ကို run လိုက်တယ် အဲဒီကောင်နဲ့ဖျက်မယ်လည်းလုပ်ရော software က Error တတ်နေတယ်။
ဒါနဲ့ memory stick ကိုချွတ်လိုက်တပ်လိုက်လုပ်ကြည့်တယ်။ Anti-virus ရော USB Disk Security ရော ရှိတော့လည်း အားကိုးမိတာပေါ့ဗျာ။(တချို့ကလည်းအဲလိုလုပ်ရင် သေတယ်ပြောလို့လေ)။မသေဘူးဗျား။ နောက်တော့ လေးငါးခါလောက်လည်းလုပ်ပီးရော ကျွန်တော့ memory stick ကိုကွန်ပျူတာက folder ပုံစံကြီးနဲ့ပြလာတယ်။ clip နှစ်ချက်နိုပ်တော့လည်းမပွင့်ဘူး။
exploer နဲ့ဖွင့်တော့လည်းမရဘူး။ cmd ထဲကနေ dir လုပ်ကြည့်တော့ data တွေက တွေ့နေရတယ်။အခြေနေမကောင်းတော့ဘူးထင်တာနဲ့ Format ရိုက်ဖို့လုပ်ရတယ်။ ကျွန်တော့မှာဗျာ 8GB လောက်ရှိတဲ့ အဲဒီ Stick ထဲက Data တွေကို cmd နဲ့တစ်ဖိုင်ချင်းကူးရတယ် မနက်ကိုလင်းရောပဲ။
အားလုံးပီးလို့ Format လည်း ချလိုက်ရော လေးငါးစက္ကန့်လောက် ပျောက်သွားတယ် ပီးတော့ပြန်ပေါ်လာတယ်။ Format ကိုလေး Quick နဲ့ချမိလို့လားသိဘူးဆိုပီး ဖြည်းဖြည်းချတော့လည်း ပျောက်ဘူး ပြန်ပြန်ပေါ်တယ်။ တခုတော့ ရှိတယ် ကွန်ပျူတာကတော့ Device အနေနဲ့ပြန်သိသွားပီစောစောကလို Folder မဟုတ်တော့ဘူး။ဒါနဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲ ဖိုင်လေးတွေကိုပြန်ထည့်ပီး ပြန်လာခဲ့ရတယ်။ နောက်နေ့ကျတော့နောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုသွားပီး ထိုးကြည့်တယ် မကျေပွဲပေါ့ဗျာ။ အဲဒီဆိုင်မှာက auto run ပိတ်ထားတယ်ဗျ။ အဲဒီမှာ Recycler ဆိုတဲ့ဖိုဒါကို Exploer နဲ့ မရဲတရဲလေးဖွင့်တယ် နောက်တော့ သူ့အောက်မှာရှိတာတွေအကုန်ဖျက်တယ်ဗျာ။ ဖိုင်ပေါင်း ထောင်ချီတယ်ဗျ။ အဲဒီစက်မှာကျတော့ ရိုးရိုးလေး Shift+Del လုပ်ရုံနဲ့ ပျက်သွားတယ်ဗျာ။ပေါ်လာတော့ဘူး
21 Re: Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem] on 20th October 2011, 11:19 pm
mr.devil.1994 wrote: အကို ရေ....ဗိုင်းရပ်စ်မွေးမြူရေးစခန်းကအကောင်လေးတွေကျွန်တော့်ကိုလွှဲပေးပါလား... ကျွန်တော်လဲလိုချင်လို့ပါဗျ......
I have only four at the moment. Some are lost with my pen drive and I can't find virus because of deep freeze. I also want to share with you. When will you free?
22 Re: Memory Stick လေး virus ကိုက်နေလို့ ပါ [Problem]